Lahatsary Fanadihadiana Avo Lenta Mampiseho An’i Chernobyl Okraniana Novatsiana Vola Feno Tao Amin’ny Kickstarter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2016 8:11 GMT
Pikantsary avy amin'ny sombin'ny fanadihadiana Chornobyl360, mampiseho drôna nalaina lahatsary tao Pripyat. Sary nindramina.
Novatsiana vola feno tao amin'ny Kickstarter ny lahatsary fanadihadiana virtoaly mampiseho ny tena zava-misy mikasika ny faritra mitoka-toerana Chernobyl Okraniana tamin'ny fampiasana teknolojian-dahatsary 360 degre. Nahazo fanohanana avy amin'ireo mpamatsy vola maherin'ny 300 tamin'ny vola mitentina 34.000 Euro mahery (efa ho 39,000 dolara) ireo mpanatontosa ny lahatsary fanadihadiana.
Natomboka tamin'ny 26 Aprily 2016 ny fanentanana tao amin'ny Kickstarter ho an'ny Chornobyl360 mba hanamarihana ny faha-30 taonan'ny loza nokleary tao Chernoby tao amin'ny toby famokarana herinaratra akaikin'ny renivohitra Okrainiana Kyiv (Chornobyl no fiantson'ny Okrainiana ny Chernobyl amin'ny teny Rosiana).
Nilaza ireo mpamokatra ny lahatsary fa te hanentana momba ny loza tao Chernobyl izy ireo, anisan'izany ny voka-dratsy ateraky ny fipoahana sy ny taratra teo amin'ny tontolo iainana, ary koa fanomezam-boninahitra ho fahatsiarovana ireo rehetra namoy ny ainy sy nitondra takaitra taorian'izany.
Midika izany fa tokony hanatsoaka lesona amin'ny fahadisoana isika ary miova. Saingy indraindray, toa goavambe ny fahadisoana ka sarotra ny miova. Iray amin'izany ny loza Chornobyl 1986. […] Niezaka ho afaka miditra sy maka sary ny toerana tena voafetra indrindra ao amin'ny Faritra Mitoka-toeran Chornobyl izahay – “tany ngazana” marina ankehitriny. Fahafahana tsy manam-paharoa handraketana ny voka-dratsy taorian'ny avonavona sy ny fanirian-dazan'ny olombelona mankany amin'ny ratsy. Ny tanjonay voalohany indrindra dia ny hisarika ny sainao sy hamela anao hijery miaraka aminay ny toerana mbola tsy nidiranao mihitsy ka tsy misy atahorana ny fahasalamanao, eny fa na ny ainao aza.
Nalaina teo anelanelan'ny Aprily 2015 sy Aprily 2016 ny lahatsary fanadihadiana tamin'ny fampiasana drôna miaraka amin'ny fitaovana fakan-tsary, nahafahan'ny ekipa niditra tao amin'ny toerana sasany tena voafetra ao amin'ny faritra mitoka-toerana Chernobyl, tahaka ny toby mpamokatra herinaratra, ny tanàna haolon'i Pripyat izay nisy ny milina, ny fasan'ny fiara sy ny sisa hafa. Miaraka amin'ny teknolojia avo lenta virtoaly tena izy 360 degre ny horonantsary mba ahafahan'ny mpijery amin'ny fotoana mampahamety azy ireo mitrandraka an'i Chernobyl sy ny faritra manodidina ny milina amin'ny endriny amin'izao fotoana izao.
Vonona izahay ary nanolo-tena hanao izany satria matoky tanteraka izahay fa tokony hanatsoaka lesona tamin'ny fahadisoantsika taloha ny taranaka hoavy. Amin'ny fanampiana ny tetikasanay, misahana ny fanentanana manerantany sy misarika ny saina manoloana ny hoavin'ny Faritra Natoka-toerana sy ny toerana tahaka izany izahay. Miahy ny manjò ireo mpanori-ponenana, mpitrongy vao homana, mponina tsy ara-dalàna ao an-toerana sy ny sisa hafa mijaly amin'ny fiantraikan'ny loza Chornobyl izahay. Tianay hahatakatra ny olona fa tsy kilalao izany.
Ny ekipa ahitana olona 15 nanatontosa ny tetikasa dia mbola repotra amin'ny fakàna horonantsarimihetsika fanampiny, amin'ny famokarana ary ny fanitsiana amin'izao fotoana izao. Mandritra izany fotoana izany, mampiroborobo ny tetikasa amin'ny alalan'ny fampirantiana ifanakalozan-kevitra sy lahatsary manintona izy ireo.
Nilaza ireo mpanatontosa ny fanadihadiana fa ny votoaty ifarimbonana dia ho azo jerena amin'ny fitaovana virtoaly rehetra misy, anisan'izany ny sehatra toy ny Google Cardboard, Samsung Gear VR, Oculus, ary ny HTC VIVE. Fantatra fa hiseho voalohany amin'ny volana Desambra 2016 ny fanadihadiana feno.